Tsy hoe tokana olona, fa ny olona manambady manomboka amin’ny fahazavana ny filalaovana fitia.»Ara-tsosialy Mampiaraka tambajotra»dia hanampy mba tonga saina ny tantaram-pitiavana ny fifandraisana amin’ny samy olona vaovao ary ela ny namako fianakaviana vady! Ny vohikala»tambajotra Sosialy Mampiaraka»ny Fiarahana no natao ho an’ny rehetra ny mponin ny tany (raha jerena ny taona). Izany no azo atao izany ankehitriny, eo amin’ny toerana io tena mba hihaona manokana virtoaly ny fitiavana. Rehefa dinihina tokoa, dia maro ny toerana tena manomboka olom-pantatra ao amin’ny Internet, ary farany fototra ny fifandraisana ara-pianakaviana, nefa dia azo atao sy ny kisendrasendra fihaonana. Vakio bebe kokoa ny momba ny Fiarahana olon-droa»tambajotra Sosialy Mampiaraka»
Amin’ny toerana tena tsy handao ny Poeta te-Haneho izany ny eritreritra momba ny fahamoràna vaky ny saina na dia nandritra ny tsy fisian’ny aterineto ny teknolojia. Rehefa dinihina tokoa, ny fankasitrahana avy amin’ny mpiara-miasa dia mety ho azo afa-tsy ny raharaha ny unadulterated fo be fitiavana! Indraindray dia misy ny mahatsiaro fa toy ny andro lasa sy ny ankehitriny ny fanjakana, dia aza mandà ny fitiavana.
Raha ny marina izany dia mandrisika ny olona maro karazana virtoaly bitan’i amin’ny fitiavana
Hamaky bebe kokoa momba ny virtoaly fitiavana amin’ny»tambajotra Sosialy Mampiaraka»
Manadala ankizilahy hatramin’ny ela ny tantara dia hitondra
Maro ireo namana tsy mitsahatra mampahafantatra ny tsirairay momba ny fandresena ny mpifanandrina ny Mampiaraka. Ny ankamaroan’izy ireo intsony noho ny amin’ny chat-pifandraisana, avo momba ny virtoaly ny firaisana ara-nofo. Tsy mahalala na obmanyval fa sary mahafinaritra ny vehivavy dia afaka mandositra ny lehilahy mamadika, fa maro ny olona no mampidi-doza tamin’ny gigolos ho an’ny vehivavy. Ianao ihany no mahita izany fomba izany: mba hahazoana tsy hoe tsy committal mahafinaritra, fa koa mba mikarakara tena ny fivoriana aorian’ny fisoratana anarana. Rehefa dinihina tokoa, virtoaly tambajotra sosialy Mampiaraka midika bebe kokoa ny tena fifandraisana eo amin’ny lehilahy sy ny vehivavy. Hamaky bebe kokoa momba ny tia tena»amin’ny tambajotra Sosialy ny Fiarahana amin’ny»tantara
«Ara-tsosialy Mampiaraka tambajotra»-izany vao nisokatra, noho izany sarotra ny hanadino
Mampientam-po fihetseham eo amin’ny sehatry ny Mampiaraka dia afaka ny ho sedraina amin’ny fanatanterahana sy ny fandefasana ny mombamomba azy ao amin’ny»ara-Tsosialy Mampiaraka tambajotra». Manasaraka ny rehetra ny tsy mahafinaritra fotoana ao amin’ny fikarohana ny tantaram-pitiavana fifandraisana, dia mila ny hazo fijaliana ihany no dingana iray: mba haka fanahy lahatra ny manomboka amin’ny mahazatra fifandraisana sy firahalahiana! Ny teknolojia farany (mora foana ny Fiarahana, ny lahatsary amin’ny chat, dikan-ny finday sy ny fampiharana, tena mombamomba, dia nanamafy, voamarina tanana) ny Aterineto dia hanampy na ny ahiahy fitiavana mba hahitana ny fahasambarana. Amin’izao fotoana izao, rariny kosa mba milaza ny tenanao sy ny lazany ao amin’ny tranonkala faritra virtoaly ny fanambadiana casket nisy manan-danja mba hanohy ny Fiarahana, ankoatra ny tontolo tsy tena misy.
Vakio bebe kokoa ny mikasika ny»Sosialy Mampiaraka tambajotra»ho»tambajotra Sosialy Mampiaraka»
← Free Online Dating Tsy Misy Fisoratana Anarana